Anopedza hupenyu hwake nekurembera; mudzidzisi wake aiwirirana naye - Tamban RELAY
Anopedza hupenyu hwake nekurembera; mudzidzisi wake aiwirirana naye
By bryamangwanabe On Nyamavhuvhu 8, 2020
Musi waNyamavhuvhu 2, 2016, Sarah, 17, akauraya hupenyu hwake nekuzviuraya nekurembera muSalt-Orens-de-Gameville, padhuze neToulouse, kuHaute-Garonne.
Pakutanga, vabereki vake vakafunga kuti kwaive kudonha kwake kubva pabhiza rake muna 2015 ndiyo yaive chikonzero chekusagadzikana kwake. Nekuti, zvichitevera tsaona iyi, achiri kuyaruka akarwara nehuropi.
Kunyangwe hazvo Sarah akange aine mamakisi epamusoro muchikoro chesekondari, kwaaive paPII (Chibatsiro cheMunhu Anobatsira), akange ave asina kusimba.
Kuvimba: Ndakapa makumi mashanu emamiriyoni kumukomana wangu ndisati ndaenda ...
Kuvimba: Ndiri kuda kurambana, mukadzi wangu anorwa neni pasina, asi ...
Asi, mazuva mashoma mushure mekutambudzika, vabereki vakasarudza kuvhura tsamba yemwanasikana wavo. Uye ikoko, vakawana nekupererwa kuti Sarah aive nehukama hwehukama nemudzidzisi wake weFrance.
Anenge mazana mana ekutsinhana kwamaimeri pakati pake nemudzidzisi wake. "Tsamba ine hunyanzvi uye zvirimo zvainyanya kukodzera" anodaro Hubert Zekri, baba vaSarah.
Sekureva kweyekupedzisira, murume uyu, aive nemakore makumi mana nemana panguva iyoyo, aida zvinopfuura hunyoro hwekunyora tsamba.
“Mwanasikana wangu akaora mwoyo, aine pfungwa dzekuda kuzviuraya. Mudzidzisi weFrance uyu akamhanyira mariri. "Haana kumurambidza zvachose kutora matanho." anovimbisa baba.
Makore mana shure kwenjodzi iyi, Hubert Zekri haaregi kurwa. Akaisa kunyunyuta kwekusabatsirika kumunhu ari panjodzi nemudzidzisi uye akanyora, kuburikidza negweta rake, kune rejisitiriti uye kushumiro yenyika renyika. Tsamba dzakasiya dzisina kupindurwa for the moment.
Sekureva kwake, hukama uhwu hwakakonzera kudzora mwanasikana wake, kumuita kuti abve kunze kwenyika, nekuvimba kwake nemudzidzisi wake izvi zvakaita kuti azviuraye.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://onvoitout.com/sarah-17-ans-se-suicide-par-pendaison-son-professeur-entretait-une-corourseance-avec-elle/
Mukadzi wemakore makumi mana nemashanu akabirwa chibharo
Baba vakabaya 4 times nemurume anga achishungurudza mwanasikana wavo kwemazuva
Une prostituée débarque en plein culte et fait une révélation choquante sur le…
Kuvimba: Ndakapa makumi mashanu emamiriyoni kumukomana wangu ndisati ndaenda kwevhiki ...
Ruvimbo: Ndiri kuda kurambana, mukadzi wangu anondirova pasina, asi haadi
Ruvimbo: Ndakabvuma kuenda kunzvimbo yake, ndisingafunge kuti zvaizopera zvakadaro